विश्वासको मतमा ओलीको दाउ : पाए बहुमतको नेतृत्व, नपाए मध्यावधि निर्वाचन Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
काठमाडौंः नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारमा दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पुगेको छ।
यी घटनाक्रमसँगै ओली सरकारको निरन्तरता या अरू विकल्प भन्ने निर्णय संसद्को अङ्कगणितले गर्नेछ। तर,अंकगणितिय हिसाबमा यसै हुन्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभा मार्फत विश्वासको मत लिने घोषणासँगै उनले विश्वासको मत पाउन एमालेको असन्तुष्ट समूहसँगै अन्य दलसँग संवाद तीव्र बनाएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेस स्पष्ट रूपमा ओली सरकारलाई असफल बनाउने पक्षमा छन्। तर यी दुई दलको मत मात्र निर्णायक हुने छैन। यसमा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) र नेकपा एमालेकै माधव–झलनाथ पक्षको भूमिका निर्णायक हुनेछ।
संसद्को अङ्कगणित अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन १३६ सङ्ख्या पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। एमालेसँग १२१ सांसद छन्। त्यसमा पनि नेपाल पक्षमा २२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र ५ समानुपातिक सांसद छन्। प्रधानमन्त्रीले भरोसा गरेको जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षमा १५ सांसद छन्।
त्यसबाहेक संसद्मा एक स्वतन्त्र सहित ४ मत बाँकी रहन्छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले जुन समयमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन् त्यसको नियतमाथि विपक्षीले शङ्का गरिरहेका छन्। संसद्मा बहुमत देखाउन अप्ठ्यारो अवस्थाबारे जानकार हुँदाहुँदै विश्वासको मत लिनुको अभिप्राय संसद् विघटन मार्फत मध्यावधिमा जाने प्रयासलाई दोहोर्‍याउने अभ्यासको रूपमा समेत हेरिएको छ।
आफ्नो पक्षमा बहुमत आए ठिकै छ। नआए अन्य दललाई पनि बहुमत पूर्याउन नदिने,नयाँ सरकार गठनमा अवरोध भएपछि त्यसैको आधारमा संसद् विघटन गराउने र मध्यावधिमा जाने उनको रणनीति देखिन्छ।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने या गुमाउनेमा माधव–झलनाथ पक्षको भूमिकालाई निर्णायक हुने ठान्छन्।
‘जसपा उहाँलाई धेरै ठुलो महत्त्वको विषयवस्तु रहेन। जसपाले समर्थन गर्दागर्दै पनि जसपाको एउटा पक्षले समर्थन गर्नेवाला छैन,’उनी भन्छन्,‘ उहाँले अपेक्षित बहुमत प्राप्त हुन नसक्ने प्रबल सम्भावना छ। उहाँलाई माधव नेपाल पक्षले नै भोट हाल्ने निश्चित छैन।’
‘एक जनाका लागि संसद् बोलाउनु नै असंवैधानिक’
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका प्रधानमन्त्रीले संविधान नै उल्लङ्घन गरेर विश्वासको मत लिन लागेको बताउँछन्। ‘संविधानमा उहाँले फाल्टु तरीकाबाट विश्वासको मत लिन पाउनुहुन्न। विश्वासको मत लिने भनेको संसद्को नियमित अधिवेशनबाट हो,’ उनी भन्छन्,‘जेठ १५ मा बजेट निकाल्नुपर्छ। त्यो भन्दा अगाडि रेगुलर हाउसबाट उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने हो। उहाँले बेइमानी गर्नुभयो।’
विश्लेषक रोका संविधानले विश्वासको मत लिन मात्र अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था नगरेको जिकिर गर्छन्।
‘हाम्रोमा विश्वासको मत लिन मात्रै भनेर बोलाउने होइन। उहाँले लिन सक्नुहुन्छ वा लिन सक्नुहुन्न उहाँको पावर छ छैन उहाँले मान्छे पाउनुहुन्छ कि पाउनहुन्न भन्ने होइन,’रोका भन्छन्,‘ राष्ट्रपतिले रेगुलर रूपबाट संसद् बोलाउनुपर्ने बेला हो।स्पेसल एक दिन उहाँकै लागि मात्र हाउस बोलाउने भन्ने हुँदैन। संविधानमा त्यो व्यवस्था नै छैन। राष्ट्रपतिले गलत गर्नुभयो।’
उनी यो विषय नै असंवैधानिक भएकाले बाँकी विषय के हुन्छ भन्नु गौण विषय मान्छन्।
ओली सरकारलाई समर्थनको विषयलाई लिएर जसपामा दुई धार देखिएको छ। संसद् विघटन असंवैधानिक भनेर सडकमा सँगै ओर्लिएका महन्थ ठाकुर सहितका नेताहरू ओलीको पक्षमा छन्। मधेसको मागमा ओली लचिलो रहेको उनीहरुको दाबी छ। डा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह ओलीको विपक्षमा छन्। उनीहरूको तर्क हिजो संसद् विघटनको विपक्षमा उभिएकाले उनलाई विश्वासको मत दिन नसकिने सो समूहको तर्क छ।
जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ ओलीलाई मत दिने कल्पनै गर्न नसकिने बताँउछन्। ‘हामीले त दिने कुरै आउँदैन नि। जसको विरुद्ध हामीले आन्दोलन नै गर्‍यौँ उसैलाई हामीले विश्वासको मत दिने सवाल नै आउँदैन,’उनी भन्छन्‘उहाँहरू(महन्थ ठाकुर पक्ष)ले के आधारमा ओलीजीको पक्षमा लाग्नुभयो उहाँहरूलाई नै थाहा होला। तर,हिजो संसद् विघटन विरुद्धको आन्दोलनमा त हामी सबै एकजुट नै भएर लागेका हौँ।’
नेता श्रेष्ठ संसद् विघटन पछि पुस ७ मा बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा फर्कनुपर्ने बताँउछन्। ‘बैठकमा महन्थजी सहित हामी सबै थियौँ। उति वेला त्यसलाई सर्वसत्तावादी अलोकतान्त्रिक,प्रतिगामी र असंवैधानिक कदम चालेको भनिएको छ। अनि उहीसँग मिलेर त कसरी जानु?’ उनी प्रश्न गर्छन्।
यद्यपि यसबारे जसपाले निर्णय भने गरिसकेको छैन। यस विषयमा एक दुई दिनमा बैठक बसेर टुङ्गो लगाइने जसपाको भनाई छ।
‘यो पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो। व्यक्तिले भन्ने कुरा होइन। मैले चाहिँ प्रष्टता साथ के भनेँ भने संसद् विघटन र संसद् पुनर्स्थापना पछि पनि प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा दिनुको साटो संसद्को भूमिकालाई कमजोर बनाउँदै नेपालको संविधान विपरीत गएका छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्,‘कोभिडको सङ्कटकालीन अवस्थामा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर सबैलाई परिचालन गरेर जानुपर्ने र मुलुकलाई एकजुट बनाएर जानुपर्ने अवस्थामा भूमिका खेल्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई विविध कारणले हामी विश्वासको मत दिन सकिँदैन।’
यही विषयले पार्टी फुटकै स्थितिमा पुगेको हो त? उकेराकर्मीको प्रश्नमा उनले त्यस्तो अवस्था नआएको दाबी गरे। ‘त्यस्तो हुँदैन। पार्टीमा केही फरक मत हुँदैमा फेटिहाल्छ भन्ने होइन।’
प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने दाउ
राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ संसद् नै नरुचाउने प्रधानमन्त्री ओलीले यही अवस्थामा विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नु संसद् विघटनको दाउको रूपमा लिन्छन्। ‘संसद्को अधिवेशन रुचाउने, सांसदबाट विश्वासको मत रुचाउने, विश्वासको प्रस्ताव रुचाउने हुनुहुन्थेन। उहाँ संसद्को अधिवेशनबाटै ईरिटेड हुने मान्छे हो। अधिवेशन त अन्त्य गरिहाल्ने हो। यसअघिका संसदहरु त्यसरी नै अन्त्य भएका छन्। तर,एक्कासि रुचाईकन उहाँले किन कल गर्नुभयो होला भन्ने प्रश्न उठ्छ।’ उनी भन्छन्।
उनी यसमा स्वाभाविक २ वटा कारण हुनसक्ने आङ्कलन गर्छन्। ‘एउटा विश्वासको मत लिएर २ वर्ष पुरापुर सरकार चलाउने। विश्वासका मत आएपछि त कसैले छुन सक्दैन। २ वर्ष सम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्दैन,’विश्लेषक श्रेष्ठको आङ्कलन छ।
उनी संविधानको व्यवस्था अनुसार बहुमत प्राप्त गरेपछि मात्र शासन गर्न सकिने भएकाले संसद्को ठुलो दलको हैसियतमा बहुमतको समर्थन प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा रहेको तर्क गर्छन्। ‘भई हालेन भने संसद् विघटन गरिहाल्ने जुन उहाँको चरम इच्छाको विषय हो,’ उनी भन्छन्।
‘मत नपाउने सम्भावनाबारे प्रधानमन्त्री पुरापुर जानकार छन्’
विश्लेषक श्रेष्ठ अहिलेको अवस्थामा विश्वासको मत आउन नसक्नेबारे प्रधानमन्त्री जानकार रहेको जिकिर गर्छन्। ‘वास्तविक कारण त केपी ओलीलाई मात्र थाहा हुन्छ। ओली संसद् अधिवेशनप्रति त्यति प्रिय मान्छे त होइन,’उनी भन्छन्,‘तर, राख्नुभयो यही कुरा मान्छेलाई अचम्म लागिरहेको छ।’
जसपाले समर्थन गर्दागर्दै पनि जसपाको एउटा पक्षले समर्थन नगर्ने र माधव नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गर्ने वा अनुपस्थिति जनाउने सम्भावना उनी देख्छन्। यही जोखिम देखेर अहिले ओलीले नेपालपक्षसँगको संवाद बढाएका छन्।
‘जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षसँग संसदीय दलमा र पार्टीको बहुमत छ त्यसैले उहाँलाई अपेक्षित बहुमत प्राप्त हुन नसक्ने प्रबल सम्भावना छ,’उनी भन्छन्,‘उहाँलाई माधव नेपाल पक्षले भोट हाल्ने निश्चित छ त? उनीहरूले कुनै पनि रूपमा साथ नदिएको अवस्थामा विश्वासको मत नपाउने देखिन्छ।’
उनी यसको दृश्य प्रदेशमा देखिएको तर्क गर्छन्।
‘गण्डकी प्रदेशको भोटिङको प्रकरणले त्यो सम्भावना छैन। कर्णाली प्रदेशले त्यो छुट्टै देखायो। फ्लोर क्रस गरेरै देखायो। माधव नेपाल पक्ष मिल्न आउँछु भन्दाभन्दै उहाँले त ढोका बन्द गर्नुभएको छ। ढोका बन्द गरेका मान्छेले उहाँलाई भोट हाल्छन् त?’ उनी शङ्का व्यक्त गर्छन्,‘त्यो सम्भावना त देखिँदैन। त्यसैले उहाँले हार्ने सम्भावना प्रचुर छ।’ यसबारेका जानकारी भएर नै प्रधानमन्त्रीले यस्तो कदम चालेको उनको विश्लेषण छ।
‘राजनीतिको चतुर खेलाडीले यत्तिको कुरा नबुझेको त होइन होला। उहाँले बुझ्नुभएको छ। उहाँले बुझ्नुको मतलब के त भने यसो भयो भनेदेखि मैले संसद् विघटन गर्ने ढोका खुल्छ,’ उनी भन्छन्,‘त्यसपछि ठुलो दलको नाताले शासन गर्न खोज्छु। शासन गर्न पाइएन भने भने यो विकल्प पनि सिद्धिएकाले संसद् विघटन गरेँ भन्ने र विघटनको संवैधानिक ढोका खुल्छ भन्ने क्याल्कुलेसन छ।’
कर्णाली प्रदेशमा माधव नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गर्दा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन सकेनन् ओली समूहले। केन्द्रमा समेत यही रणनीतिमै देखिन्छ नेपाल समूह। यस्तो अवस्थामा ओलीलाई जसपाले साथ दिए पनि उनको सरकार जोगिन सम्भव छैन।
विश्वासको मत माग्न आएका ओली सहितको टोलीलाई नेपाली काँग्रेसले विश्वासको मत दिन नसक्ने जवाफ दिएर पठाइसकेको छ। माओवादी केन्द्रले यही बिचमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय गरिसकेको छ।
यो बेलामा माधव समूहलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन नसके सरकार पनि ढल्ने र विपक्षीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने जोखिम देखेरै उनी अहिले नेपाल समूहलाई सहमत गराउन कस्सिएका छन्। चरण चरणमा ओली र नेपाल समूहसँगै ओली र नेपालबिच समेत छलफल भइरहेको छ। नतिजा भने आएको छैन।